မာရီ ကျူးရီး - ဝီကီပီးဒီးယား
မာရီ ကျူးရီး (အင်္ဂလိပ်: Marie Skłodowska Curie; /ˈkjʊəri/; ပြင်သစ်: [kyʁi]; ပိုလန်: [kʲiˈri] ၇ နိုဝင်ဘာ ၁၈၆၇ – ၄ ဇူလိုင် ၁၉၃၄) သည် ပိုလန် ရူပဗေဒနှင့် ဓာတုဗေဒ ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရေဒီယိုသတ္တိကြွခြင်းကို ရှေးဦးစွာ သုတေသနပြုခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူမသည် နိုဘဲလ်ဆုကို ရရှိခဲ့သော ပထမဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်သလို နိုဘဲလ်ဆု နှစ်ကြိမ်ရရှိသော ပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၊ တစ်ဦးတည်းသော အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး မတူညီသော သိပ္ပံပညာရပ်နှစ်မျိုးအတွက် နိုဘဲလ်ဆုရသော တစ်ဦးတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သည်။
၁၉၂၀ ခုနှစ်ခန့်က မာရီကျူးရီး
(1867-11-07)၇ နိုဝင်ဘာ၊ ၁၈၆၇
ဝါဆောမြို့၊ ပိုလန်၊ ရုရှားအင်ပိုင်ယာ
၄ ဇူလိုင်၊ ၁၉၃၄(1934-07-04) (အသက် ၆၆)
ရူပဗေဒ နိုဘဲလ်ဆု (၁၉၀၃)
Davy Medal (၁၉၀၃)
Matteucci Medal (၁၉၀၄)
Elliott Cresson Medal (၁၉၀၉)
Albert Medal (၁၉၁၀)
ဓာတုဗေဒ နိုဘယ်ဆု (၁၉၁၁)
Willard Gibbs Award (၁၉၂၁)
ပယ်ရီကျူရီ (၁၈၅၉–၁၉၀၆; ၁၈၉၅ လက်ထပ်)
Irène Joliot-Curie (၁၈၉၇–၁၉၅၆)
Ève Curie (၁၉၀၄–၂၀၀၇)
သူမသည် မတူညီသော သိပ္ပံပညာရပ်နှစ်မျိုးအတွက် နိုဘယ်ဆုရရှိသော တစ်ဦးတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သည်။
မာရီ ကျူးရီးကို ၁၈၆၇ ခု နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ပိုလန်နိုင်ငံ ဝါဆောမြို့၌ ဖွားမြင်သည်။ ပိုလန်လူမျိုးမိဖများမှ မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်၍၊ သူ၏ဖခင်မှာ ဝါဆောမြို့ကောလိပ်ကျောင်းမှ ရူပဗေဒပါမောက္ခ လာဒစ္စလော့စကလိုဒေါ့စကား ဆိုသူ ဖြစ်ပေသည်။ အသက်အရွယ်ငယ်စဉ်ကပင် မာရီသည် ဖခင်၏ လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းထဲတွင်သာ အချိန်ဖြုန်းလေ့ ရှိသည်။ ဤသို့ဖြင့် ကြီးပြင်းလာသည့်အခါ ဖခင်၏အလုပ်တွင် စိတ်ဝင်စားလာပြီးလျှင် ဖခင်ထံတွင် အခြေခံ သိပ္ပံပညာရပ် များကို သင်ကြားခဲ့၏။ ဉာဏ်ပညာထက်မြက်သည့်အလျောက် ဆရာကြီး၏ တပည့်များက မာရီအား ပါမောက္ခကလေးဟူ၍ အမည်ပေးခဲ့ကြသည်။ မာရီသည် အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင် သင်္ချာနှင့် သိပ္ပံပညာရပ်များ၌ ထူးချွန်သဖြင့် ရွှေတံဆိပ်ဆု ရခဲ့ဘူး၏။
ရုရှားနိုင်ငံတွင် ကလေးထိန်းဆရာမအလုပ်ကို ခေတ္တလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးနောက် မာရီကျူးရီးသည် တော်လှန်ရေးကျောင်းသားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ခဲ့သဖြင့် ဝါဆောမြို့မှ ပါရီမြို့သို့ တိတ်တဆိတ် ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။ ထိုနောက် မာရီသည် ပညာဆက်လက်သင်ကြားခွင့် ရရှိသဖြင့် ကြိုးကြိုးပမ်းပမ်း သင်ယူခဲ့သည်တွင် သိပ္ပံဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် ပါမောက္ခ ပီယဲကျူးရီနှင့် မာရီတို့သည် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး မေတ္တာသက်ဝင် ချစ်ခင်ခဲ့ကြရာ ၁၈၉၅-ခုနှစ်တွင် ထိမ်းမြားလက်ထပ်လိုက်ကြသည်။ ပီယဲကျူးရီမှာ ထိုစဉ်က ပါရီမြို့ရှိ ရူပဗေဒနှင့် ဓာတုဗေဒပညာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချသော မျူနီစီပယ်ကျောင်း အထွေထွေ ရူပဗေဒ ပါမောက္ခဖြစ်သည်။ ဝါသနာတူညီလှသော ဇနီးမောင်နှံတို့သည် သိပ္ပံပညာပြဿနာများကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လျက် သုသေတန လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၀၆ ခုနှစ်တွင် အမ်ဗက္ကရယ်ဆိုသူသည် အလွန်အလေးချိန်စီးသော ယူရေနီယမ် သတ္တုတွင် ရေဒီယိုသတ္တု ရှိကြောင်း စုံစမ်းရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့လေသည်။ မေရီနှင့် ပီယဲတို့သည် အမ်ဗက္ကရယ် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော ရေဒီယိုသတ္တုတွင် များစွာ စိတ်ဝင်စားလာကြ၍ အခြားဒြပ်စင် များတွင်လည်း ထိုရေဒီယိုသတ္တု ရှိမည်ဟု ယုံကြည်သဖြင့် စူးစမ်းရှာဖွေကြည့်ရာတွင် သိုရီယမ် သတ္တုတွင်လည်း ရေဒီယိုသတ္တုရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၁၈၉၈ ခု ဇွန်လတွင် သူတို့သည် ပစ်ချဗလင်း ကတ္တရာမှ ရေဒီယိုသတ္တုရှိသော ဒြပ်စင်တစ်ခု တွေ့ရှိခဲ့လေသည်။ ယင်းကို မာရီသည် သူ၏ဇာတိချက်ကြွေ ပိုလန်ပြည်ကို ဂုဏ်ပြုသောအနေဖြင့် ပိုလိုနီယမ်ဟု မှည့်ခေါ်ခဲ့၏။ ထိုနှစ်တွင်ပင် ဂျီးဗီးမွန် ဆိုသူနှင့်အတူ ရေဒီယမ်ကို တွေ့ရှိပြန်သည်။ သူတို့သည် ပိုလိုနီယမ်နှင့် ရေဒီယမ်တို့ကို ပစ်ချဗလင်းကတ္တရာမှ ပင်ပန်းကြီးစွာ ထုတ်ယူရရှိခဲ့ကြသည်။ ရေဒီယမ်မှာ ယခုအခါ ကင်ဆာနှင့် အခြားရောဂါများကို ကုသရာတွင် အသုံးပြု ရသော ထူးဆန်းသည့်ဒြပ်စင်တစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။ ၁၉ဝ၃ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်ပြည်တော်ဝင် အသင်းက ကျူးရီဇနီးမောင်နှံတို့အား အကြီးဆုံးသိပ္ပံဂုဏ်ထူး ဖြစ်သော ဒေဗီတံဆိပ်ဖြင့် ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်၌ပင် ရူပဗေဒ ပညာရပ်အတွက် အမ်ဗက္ကရယ်နှင့် တွဲဖက်၍၊ နိုဘဲလ်ဆုကို ရရှိခဲ့၏။
ထိုကြောင့် ၁၉၁၁-ခုနှစ်တွင် ဓာတုဗေဒပညာရပ်အတွက် နိုဘဲလ်ဆုဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရပြန်သည်။ နိုဘဲလ်ဆုကို နှစ်ကြိမ် ရခဲ့သူများတွင် ပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ထူး ဖြစ်ပေသည်။ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံ တွေ့ရှိခဲ့သော ရေဒီယမ်ဒြပ်စင်နှင့် စပ်လျဉ်း၍၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများ မကြာခဏ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် ယင်းဒြပ်စင်၏ ရေဒီယိုသတ္တုဒဏ်ကို ခံရဖန်များသဖြင့် သွေးအားနည်းသောရောဂါ ရရှိပြီး မဒမ်ကျူးရီးသည် ၁၉၃၄ ခု ဇူလိုင် ၄ ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားလေသည်။ သူ့တွင် သမီး နှစ်ယောက် ကျန်ခဲ့ရာ အကြီး အိုင်ရင်းကျူးရီးနှင့် သူ၏ခင်ပွန်းသည် ဖရက်ဒရစ်ဇောလျိုးတို့သည် မိဖများ၏ သုတေသနလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ ၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင် ဓာတုဗေဒပညာအတွက် နိုဘဲလ်ဆု ရရှိခဲ့လေသည်။
↑ Marie Curie – Biography။ Nobelprize.org (4 July 1934)။ 8 June 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 1 August 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ESPCI Paris : Prestige။ 26 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jones၊ Daniel (2011)။ Roach၊ Peter; Setter၊ Jane; Esling၊ John (eds.)။ Cambridge English Pronouncing Dictionary (18th ed.)။ Cambridge University Press။ ISBN 978-0-521-15253-2။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မာရီ_ကျူးရီး&oldid=686863" မှ ရယူရန်
၂၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။